mushaTHE WORLDzvekuEurope33 FranceVashandi veChitima cheFrance Vanosiya Jobho Kupesana nePension Reform
Vashandi veChitima cheFrance Vanosiya Jobho Kupesana nePension Reform
25 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 33 France, zvekuEurope, THE WORLD, Railway, GENERAL 0
vashandi vechitima veFrance vanorega kupenha
Vashandi vezvitima vekuFrance vaishora shanduko iyo hurumende yavanoda kushandisa mumutemo wepension vasiya mabasa. Nekuda kwekuita kwevashandi, kuvhiringidzika kwakaitika mune chechitima service.
MuFrance, vashandi vezvitima vakarova kusiya shanduko iyo hurumende iri kuda kudzikisa, sekuderera kwemari pamudyandigere, uye zvishoma nezvishoma kubvisa zera rekubva pamudyandigere kubva ku62 kuenda ku64. Vashandi vakasiya basa pakadaidzwa neCommunity Workers 'Union (CGT) neSouth Ray Sud Rail Union, avo vashandi vezvitima vari nhengo, varatidzira shanduko yehurumende muParis.
Nekuda kwekuratidzira, zvimwe zvitima zvehukama uye masevhisi epasi pechikepe hazvina kukwanisa kuzikanwa. Iko kushandiswa kwezvishandiso zvakakosha kuti vagari vafambe pamwe nekuzivisa kwekurwiswa kumberi kwaita kuti kuvharwe kwetraffic.
Pension honey mumuromo weTÜDEMSAŞ vashandi 03 / 05 / 2013 TÜDEMSAŞ mushandi mudyandigere uchi mumuromo Turkey Railway mamiriro njanji vashandi pamwe kuitwa mutemo pamusoro mazvake pakufamba vakauyawo kuna wenyaya. Bhodhi yacho yakamanikidzwa kuti iwedzere nhamba yevashandi vari kushanda muchidimbu cheTCDD, chiri muTÜDEMSAŞ, kuburikidza nokurega basa. Maererano neMutemo, iyo yakabudiswa muGavhidhiyo, avo vaiva nekodzero yekubhadhara mari yepasheni asi vaifanira kuramba vachirasikirwa nekuda kwezera remakore vakagamuchira mabhonasi ekubhadhara mari. Chikamu che5 chemurairo ndeche5 yenguva pfupi. Chirevo ki Annex (I) uye (II) yeMutemo Mutemo Nhamba 399 inoshandiswa muTCDD nemasangano ayo TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ naTÜDEMSAŞ esinde
Vashandi vemotokari vakasiya basa, vasingazivi kuti vafambisi vechikwata vakadzokera kune varindi 23 / 05 / 2012 Mukubvumirana kwebasa pamwe chete, vashandi vehurumende vanobva kumakambani ehurumende vasina kukwanisa kubvumirana nehurumende kusiya. MuAdana, vashandi vezvitima vakatanga chitambo chavo ku00.00. Sangano rakasiyana-siyana rakatsigirwa nemudhiriri we zurna Değiş uye akatsigira chikwata. Vagari vanga vasingazivi nezvekomba racho vakanga vadzokera muwadi. Kutakurwa kunorwisana nekuda kwekurova. Apo zvitima zvakatakurwa nembongoro hazvina kufamba, varidzi vaitambudzwa. Turkey Kamu-Sen zvakabatana kune Turkish Transportation-Sen Branch Chairman Cengiz kose Adana, maererano purogiramu yakataurwa seboka bargaining akati kuti basa stoppage rakatanga muna 00.00. Köse, uyo akasimbisa chisarudzo chehurumende chekuita nhaurirano dzekukwirira kwemaawa, kusazvidza mukuru wehurumende nekupwanya inflation, gel
TCDD Vashandi Vanosiya Jobho Mumvura | Sivas (Photo Gallery) 16 / 04 / 2013 Vashandi veTCDD vakasiya basa mumvura yevaTCDD muSivas vakasiya basa rimwe zuva mumvura. Vashandi veTCDD vakagadzira hurukuro pamberi peSivas Railway Station kupikisa Mutemo weKununura Kwezvitima Zenzira dzakatumirwa kuTurkey Grand National Assembly. Ind Isu tiri mambakwedza ehurongwa hwepamutemo huchagadzirisa mugumo uye remangwana rezvitima zvedu zvine mbiri yegore negore. Kutakura ndiro simba rekushandisa kwekuvandudza nyika uye hupfumi. Nokuda kwechikonzero ichi, 156 yakavakirwa pabasa nekutaridzika kwezvakaitika kare zvakaitika, ruzivo uye kuwedzerwa kwehutano huripo.
Deutsche Bahn Vashandi Vanosiya Jobho 18 / 03 / 2013 Parinouya kukonzera vamwe chitima mabasa vakanga yabviswa muGermany, kuchiteshi zvekutepfenyura pamwe Railways German (Deutsche rautateiden) pakati pamusoro deadlock ari akaita seboka bargaining zvibvumirano akaita yose mangwanani ano nyika-awa maviri ranwa kwaibatsira. Mangwanani maawa pakati 06.00-.8.00 kuti yokutanga yambiro wavanozvisunga wakaitwa nokuda rakanaya chando mumaruwa munyika, kusanganisira East Germany yakanga akaremara senga. Somugumisiro wekutsvaga, kutakura pakati pemaguta akawanda kwakamira, asi mune mamwe mitsetse kunokosha kunonoka kwakaitika. Sezvo vashandi vanoshanda mumisangano yekugadzira teregiwo vanoitawo chimwe chinhu munhanho yekunyevera, vanofanira kutora nguva inotevera
TCDD yenguva pfupi vashanduri vashanduki 11 / 06 / 2014 TCDD mudyandigere Kupanduka vashandi pfupi: Republic of Turkey State Railways (TCDD) Sezvo 1975 140 makore kushanda semushandi vashandi pamwaka Moosh akanga pedyo vasingakwanisi mudyandigere. pashure 60 makore pamudyandigere, asingakwanisi layoff vashandi vakamirira, hurumende akabvunza State Railway vashandi kupa kurerukirwa kuti mumwaka vashandi. TCDD xnumx'inc munharaunda pralhad Açıkbaş vashandi 'vamiririri, "vakawanda 5 mwedzi pagore kusvikira gore 2009, 3 mwedzi pashure paizvozvo isu kumhanya. Tichafara zvino acharega asati arega basa," akadaro. Açıkbaş "apo paya pamudyandigere vanoshanda mukati yezvinoreva mutemo, entrants Mune 6 kusiya basa asati arega basa ...
Nhasi munhoroondo: 25 September 1919 pedyo neVezrrhan
TCDD kuenda kuRent Sirkeci uye Haydarpaşa Chitima Chiteshi
Pension honey mumuromo weTÜDEMSAŞ vashandi
Vashandi vemotokari vakasiya basa, vasingazivi kuti vafambisi vechikwata vakadzokera kune varindi
TCDD Vashandi Vanosiya Jobho Mumvura | Sivas (Photo Gallery)
Deutsche Bahn Vashandi Vanosiya Jobho
TCDD yenguva pfupi vashanduri vashanduki
Chief Executive Officer Abe Pension Funds Unoda Kununura mu 90 Billion Dollar High Speed ​​Train Project
BTS, neFrance yaVashandi veSirivha
Vashandi veMetro muFrance vakabatanidzwawo mumutambo
France Vashandi vezvitima vanoendesa mberi sarudzo